Nri Mkpa Mkpa Mpempe | Ahịa mgbasa ozi AromEasy
Ihe na February 19, 2020 February 19, 2020 by Aromaeasy
Ndị hụrụ Citrus ga-ejikwa oghe aka mepụta oroma dị ụtọ oroma, nke kachasị n'ihi ụtọ ya, na-akpali akpali, yana kwa maka ihe ndị na-eme ka ihe dị mma na-alụ ọgụ. Oroma dị ụtọ na-eweta ọtụtụ uru na ahụ na uche. Iji maa atụ, ọ ga - enyere gị aka ịsụ ngọngọ site na ibelata ahụ erughị ala, belata ihe mgbu, mee ka ahụ gị dịkwuo mma yana obara obara obara. Ma gịnị ka ị ga - eme ka anya gị meghee maka mgbe ị na-eji mmanụ oroma dị ụtọ?
Kedu mmanụ mmanụ mmanụ dị ụtọ
Mkpa mmanu bu mmanu mmanu sitere n ’osisi. A na-ewepụta mmanụ mmanụ oroma dị ụtọ dị mma site na ịpị oyi. Igwe mmiri oyi na-egbochi antioxidants na ihe ndị dị ike na-eme ka ọ ghara ịdị na-ekpo ọkụ. Mgbe ikuku mechara, ụfọdụ mmanụ citrus na-eme ka ikuku kpoo site na ịta n'ihu. Ka ọ dị ugbu a, enwere ike ịmepụta mmanụ oroma site na mmịpụta nzere na mmịpụta ikuku CO2 dị elu.
Mgbe mmịpụta, mmanụ oroma dị mkpa nwere agba odo-odo ma ọ bụ oroma-agba aja aja, ma na-enweta ọkụ, ụtọ, ụtọ nke mkpụrụ n’onwe ya.
Kedu ihe mmanụ mmanụ a na-ejikarị?
Kemgbe ọtụtụ narị afọ gara aga, mmanụ oroma dị mkpa nwere ọtụtụ ihe. Ndị a nwere ike ịgụnye ngwa maka:
Welite ọnọdụ gị ma ọ bụ belata nrụgide
Na-emeso ọnọdụ anụ ahụ dị ka ihe otutu
Belata ihe mgbu ma ọ bụ mbufụt
Mee ka afọ ju gị
Jiri dịka onye ọcha ụlọ
Tinye ísìsì ụtọ na-adọrọ adọrọ n’ime ụlọ ma ọ bụ n’ihe dị ka isi na nhicha
Nye ihe oriri na ihe ọveraụ flavorụ dị ụtọ
Kemgbe ụwa, mmanụ oroma dị ụtọ nwere ọtụtụ ihe eji eme ụlọ, dị ka mgbakwunye ihe ọ drinksụatingụ na-atọ ụtọ na ọ drinksụ ,ụ, ihe ọseụ ,ụ, chọkọleti na ihe ndị ọzọ. N ’ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọgwụ antiseptik na antiseptik nke mmanụ oroma na-eme ka ọ dị mma maka imepụta ihe ịchọ mma na ngwaahịa akpukpo ahu dị ka soaps, lotions, na deodorant. N'ihi njigide ihe okike ya, a na-ejikwa mmanụ oroma na nhicha ngwaahịa dịka freshening house. N’ihe dị ka afọ 1900, a na-eji ya ewepụta ihe na-esi ísì ụtọ nke ngwaahịa dị iche iche, dị ka ihe nhicha, ihe na-esi ísì ụtọ, nsị, na ụlọ mposi ndị ọzọ. Ka oge na-aga, mmanụ oroma dị ụtọ na mmanụ citrus ndị ọzọ malitere ime ihe na-esi ísì ụtọ citrus. Taa, ọ bụrụla akụrụngwa dị mkpa na ịchọ mma na ngwaahịa ahụike n'ihi njiri mara ya, asacha yana ọcha.
Kedu uru mmanụ mmanụ dị mkpa?
Anyị ekwuola ụzọ ụfọdụ enwere ike isi jiri mmanụ mmanụ dị mkpa mee. Ma gịnị bụ uru ya na ya, enwere ike iji ya?
Ka anyị tinye omimi miri n'ime uru mmanụ mmanụ dị ụtọ mmanụ:
Na-emeso nchegbu na ịda mba
Ngwongwo Anticancer na antioxidant
Meziwanye mmega ahụ
Idozi na idozi Njirimara na onodu
Ọ nwere ike weta gburugburu na-enye ume ọhụrụ, okpomoku, na-ewuli elu, ma na-enwu gbaa
Mmanụ oroma nwere ikike iji bulie ihe mgbochi ma belata ọtụtụ akara nke ọrịa dị iche iche. N'ihi ya, ejiri ya na ọgwụ ọgwụ ọdịnala maka ọgwụgwọ nke ọria, nchekasị na-adịghị ala ala na nsogbu ahụike ndị ọzọ.
N'iji mmanu ogwu eme ihe, ihe uto di uto nke mmanu oroma di nkpa nwere mmetu obi ma mekwaa ka o gha enyere gi aka iwetulata obi uto. Ọ bụghị naanị na ọ na -eme ebe obibi dị ọkụ, kamakwa ọ na-akpali ike nke sistem ma na-ewepụ nje ikuku.
Banyere usoro eji eme ihe, mmanụ mmanụ dị mkpa iji nye aka n'ịkwalite ịcha akpụkpọ na ịdị ọcha, na-esite na ahụike, ọdịdị, na ụdị.
Hịa aka n'ahụ, mmanụ oroma dị mkpa nwere ike iji mee ka ọbara gbasaa. E kwenyere na ọ ga-ebelata ahụ erughị ala metụtara mbufụt, isi ọwụwa, na ịda mba.
N'iji ọgwụ, mmanụ mmanụ oroma dị mkpa na-ebelata ihe mgbu mgbu. Maka nke ọzọ, a na-eji ya belata nrụgide, afọ ime, afọ ọsịsa, afọ ntachi, afọ mgbu, na mkpọchi imi.
Etu esi eji mmanu oroma di nkpa
Likechọrọ ka ịgbakwunye isi ísì ụtọ gị n'ime ụlọ gị? Ka ị ga - achọ ịgbanye ọnọdụ gị ntakịrị ntakịrị? Site na diffusers AromaEasy, mmanụ oroma dị ụtọ nwere ike inyere gị aka na nke ahụ.
Ndị na - eme ihe dịgasị iche iche na - ete mmanụ dị mkpa wee kesaa ya nwayọ nwayọ. Mgbe ị na - arụ ọrụ, ọ na - enye mgbasa nke mmanụ oroma dị ụtọ dị na oghere gị niile. Ugwu na-adọrọ adọrọ ga-adịgide ruo ọtụtụ ọnwa n'ihi nkwalite na-esi ísì ụtọ na-aga n'ihu.
Na AromaEasy, ị nwere ike ịzụta ọtụtụ ụdị diffusers na ntanetị. Difdị diffuser ọ bụla nwere ntuziaka a na-enye ya.
For na-achọ ụzọ ọzọ ịgbakwunye isi ihe oroma n’ime ụlọ gị? Na-achọ onye ọcha? Soro usoro a dị n'okpuru ebe ị na-ete mmanụ mmanụ mmanụ:
Tinye mmanụ mmanụ oroma dị mkpa iji mee ka mmiri banye na karama. Nwere ike ikwu dose bụ 15 tụlee ma ọ bụ obere kwa ounce mmiri. Ikwanye karama ahụ ka agwakọta ha nke ọma.
Chọta ọgwụgwọ nke mgbu ma ọ bụ mbufụt? Gini mere ichoghi ime mmanu nke gi jiri mmanu mmanu di nkpa?
Ikwesiri itugide oroma mmanụ dị mkpa na mmanụ ụgbọelu dị ka mmanụ aki oyibo ma ọ bụ mmanụ almọnd. Anyị na-akwado iji ihe ruru 15 tụlee nke mmanụ dị mkpa kwa ounce nke mmanụ ụgbọelu na-eme mmanụ ịhịa aka na ntụpọ 2.5%.
Akụkọ ihe mere eme nke oranges
Oranges, tinyere mkpụrụ osisi grepu, lemon, na lime, bụ ndị ezinụlọ citrus. Echere na a ga-enweta mmanụ mbuze na osisi China na China. N’afọ 1493, Christopher Columbus buuru mkpụrụ oroma n’oge njem ya gaa Amerika, n’ikpeazụ, mkpụrụ ndị ahụ rutere Haiti na Caribbean. Kemgbe ahụ, osisi oroma agbasawo gburugburu ụwa.
Ruo ọtụtụ puku afọ, mmanụ oroma egosiwo ike ya iji mee ka ihe mgbochi ghara ịdị ma belata ihe mgbaàmà nke ọrịa. N'ime ngwa ahụike ọdịnala, ọ dị mma n'ọgwụgwọ akwara, nrụgide na-adịghị ala ala na nsogbu ahụike ndị ọzọ. Usoro ọgwụgwọ nke ndi mmadu na mpaghara Middle East, India, na China na-eji mmanụ oroma mee ihe iji belata oyi, ụkwara, ike ọgwụgwụ, flu, afọ mgbu, ọbara na-adịghị mma, na ọrịa anụ ahụ.
Nchekwa na nsonaazụ ya
Mgbe ejiri mmanụ, mmanụ ọ bụla dị mkpa nwere ike ibute mmeghachi omume anụ ahụ. Ọ bụrụ na ị na-enwe nchegbu maka mmeghachi omume nwere ike, nwalee obere mmanụ oroma mmanụ gbara agba nke dị na ikiaka tupu iji ya na mpaghara buru ibu.
Zere iji mmanụ dị mkpa mmanụ ma ọ bụ mmanụ oxidized dị ka nke a nwere ike ịkpasu iwe anụ ahụ. Enwere ike ịchọpụta mmetụta nke akụkụ a mgbe ejiri mmanụ oxidized, ma ọ nwere ike ibute mmeghachi omume siri ike mgbe ọtụtụ ojiji.
Citfọdụ mmanụ citrus dị mkpa bụ fototoxic. Nke a pụtara na ọ bụrụ na iji ha na anụ ahụ wee mechaa na anyanwụ, ha nwere ike ibute mmeghachi omume anụ ahụ na-enweghị atụ. Mgbe ị na-eji mmanụ citrus na-eji isi, jide n'aka na ị ga-eche opekata mpekere 24 tupu ị pụọ n'èzí.
Mmanụ oroma dị ụtọ nke nwere mmanụ dị ala nwere nsogbu nke Phototoxicity dị ala. Kama ị kwesịrị ịkpachara anya banyere ịpụ apụ ozugbo ị jiri ya na anụ ahụ.
Nwekwara ike ịgbaso usoro nchekwa ndị a:
Ejila mmanu mmanu di mkpa na akpukpo ahu gi.
Debe mmanụ ahụ n’anya gị na akụkụ ndị ọzọ siri ike dị ka akpa imi gị.
Debe mmanụ na ebe anụ ụlọ agaghị eru, yana ụmụaka n'okpuru afọ 8.
Y’oburu na mmanu mmanu di nkpa maka mmanu eji aru aru, hu na uwa I no adi.
Mee ka dọkịta gị tupu gị tee mmanụ mmanụ dị mkpa Ọ bụrụ na ị dị ime, na-enye nwa ara ma ọ bụ na-a takingụ ọgwụ ọgwụ.
A na-eji mmanụ oroma dị mkpa dị iche iche mee ihe n'ọtụtụ ngwa, site na iwuli ọnọdụ gị elu na ịgbakwunye ihe citrus na-enye ume ọhụrụ n'ime ụlọ gị.
Ọtụtụ nnyocha egosila na mmanụ oroma dị mkpa nwere ike ịnwe ọtụtụ uru. Ufodu ihe omuma tinyere oru ogwu, ogba aghara na ihe ochicho.
Gbaa mbọ hụ na ị na-eji mmanụ dị mkpa arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji mmanụ mmanụ dị ụtọ dị ụtọ ma nwee ajụjụ, obi abụọ ma ọ bụ nchegbu, gwa dọkịta gị tupu ị jiri ya.